မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နှင့် လက်ရွေးစင်အသင်း နည်းပြ အန်တွမ်နီဟေးတို့ နှစ်ဖက် သဘောတူ စာချူပ်ဖျက်သိမ်း – Myanmar Football Fedration
မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်(MFF)နှင့် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင်အသင်း နည်းပြချုပ် အန်တွမ်နီဟေးတို့သည် ယနေ့မနက်ပိုင်းမှ စတင်၍ နှစ်ဖက်သဘောတူ စာချုပ်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ MFF နှင့် ဂျာမနီ နည်းပြ အန်တွမ်နီဟေး၊ လက်ထောက်နည်းပြ ခီမေးလ် ဟာလတ်၊ ဂိုးနည်းပြ ကာစတန် မာတင် ဟာဇော့ တို့သည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ ၁၆ ရက်နေ့က တစ်နှစ်ခွဲကြာ စာချူပ်သက်တမ်း ချုပ်ဆိုခဲ့ကြပြီး မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အသင်းအား ၂၀၁၈ အာဆီယံ ချန်ပီယံရှစ် (ဆူဇူကီးဖလား) ပြိုင်ပွဲတွင်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ ယူ၂၃ အိုလံပစ် အသင်းအား အာရှအားကစား ပွဲတော်တွင်လည်းကောင်း အောင်မြင်မှုများ ရရှိရန် အတူတကွ ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။သို့သော် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ဆူဇူကီးဖလား ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာအသင်း အုပ်စုမှထွက်ခဲ့ရခြင်း အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် နည်းစနစ်ကော်မတီမှ အပြန်အလှန် သုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်ကာ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အသင်းနည်းပြချုပ် အန်တွမ်နီဟေးနှင့် လမ်းခွဲရန်အတွက် ဆုံးဖြတ်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
” ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ကျွန်တော့်အသင်း၊ ကျွန်တော်တို့ ကစားသမားတွေ၊ အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချူပ် မိသားစုဝင်တွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောလိုပါတယ်။ အားလုံးနဲ့ အတူတကွ လက်တွဲ လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာတာ ဂုဏ်ယူစရာနဲ့ အခွင့်အရေး တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ အားလုံးပဲ လိုချင်တဲ့ အောင်မြင်မှုကို ထိရောက်စွာ ရရှိနိုင်ပါစေလို့ ကျွန်တော် အကောင်းဆုံး ဆန္ဒပြုပါတယ်။ အထူးကျေးဇူးတင်ရမှာကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြန်မာ့ဘောလုံး ပရိသတ်ကိုပါ။ တကယ့်ကို အံ့သြချီးမွမ်းဖွယ်ရာ ကောင်းတဲ့ပရိသတ်တွေပါပဲ။” ဟု အန်တွမ်နီဟေးက နှုတ်ဆက်စကား ဆိုခဲ့သည်။
နည်းပြချူပ်အား စာချူပ်ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ MFF နည်းစနစ် ကော်မတီက ” မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် အသင်း ဆူဇူကီးဖလား ပြိုင်ပွဲအုပ်စုမှ ထွက်ခဲ့ရခြင်းမှာ နည်းပြချူပ် တစ်ဦးတည်း အပေါ်တွင်သာ တာဝန်ရှိခြင်း မဟုတ်ကြောင်း၊ MFF နည်းစနစ်ကော်မတီ အနေဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံ စနစ်တကျ အပြန်အလှန် သုံးသပ်ခဲ့ကြောင်း၊ MFF နှင့် နည်းပြချူပ်တို့ စာချူပ် ချူပ်ဆိုရာတွင် အဓိက ဦးတည်ချက်ဖြစ်သည့် အာဆီယံ ချန်ပီယံရှစ်(ဆူဇူကီးဖလား) အောင်မြင်မှုရရှိရေး သည်သာ စာချူပ်၏ အဓိကအချက် ဖြစ်သည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ လမ်းခွဲရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ နည်းပြချူပ်တွင်သာ အပြည့်အ၀ တာဝန်ရှိခြင်း မဟုတ်ဘဲ ကစားသမားများ အပါအ၀င် ဘက်ပေါင်းစုံမှ အားနည်းမှုများ ကြောင့်သာ အောင်မြင်မှုနှင့် ဝေးကွာရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အဖွဲ့ချူပ်နှင့် ကဏ္ဍအသီးသီး အားနည်းမှု၊ မြန်မာ့ ဘောလုံး၏ အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ ဖြစ်သည့် ကစားကွင်း Facilities များ ကောင်းမွန်ခြင်း လုံလောက်ခြင်း မရှိမှု၊ လူငယ်ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပနေသော်လည်း လုံလောက်ခြင်း မရှိသေးမှု၊ မျိုးဆက်သစ်များ စဉ်ဆက်မပြတ် ပေါ်ထွက်နေရေးနှင့် လူငယ်ပြိုင်ပွဲများ အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့် ကျင်းပနိုင်ခြင်း မရှိသေးမှု၊ အခြေခံ အဆောက်အဦနှင့် သက်ဆိုင်ရာ နေရာအသီးသီးတွင် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ နည်းပါးမှု၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ယှဉ်မည်ဆိုပါက အဘက်ဘက်မှ နိမ့်ကျနေမှု အစရှိသဖြင့် အခြေခံ ဘက်ပေါင်းစုံ အားနည်းနေမှုများနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ကြောင်း နည်းစနစ်ကော်မတီက သုံးသပ်ခဲ့သည်။
MFF part way with National Team Head coach Antonie Hey by mutual agreement
Myanmar Football Federation (MFF) has terminated National Team Head Coach Antoine Hey’s contract by mutual agreement today at MFF office.
Over the past seven monthes he has helped the Myanmar National Team (Asian Lions) to evolve asateam, and tried to get success in the group matches of 2018 AFF Suzuki Cup and Asian Games Football tournament.
However, Myanmar National Team failed to reach the semi-final target of 2018 AFF Suzuki Cup.
Members of the MFF Technical Committee gathered forasession on Wednesday and after considerations, announced that MFF should terminate the contract of National Team Head Coach but Technical Committee agreed that he is not the only responsible person for failure in 2018 AFF Suzuki Cup. We need to consider the lack of various resources such as the standard of stadium and play grounds, players, financial assistants, youth competitions and other developments.
” I would like to thank my Team, our Players, Officials and members of the Myanmar Football Federation. It was an honor and privilege to work with you. My best wishes for the future for you all, may all your targets be achieved one day. A special thanks to our supporters,you have been fantastic!” said Antoine Hey.
မွနျမာနိုငျငံ ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျနှငျ့ လကျရှေးစငျအသငျး နညျးပွ အနျတှမျနီဟေးတို့ နှဈဖကျ သဘောတူလမျးခှဲ
မွနျမာနိုငျငံ ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ(MFF)နှငျ့ မွနျမာ့ လကျရှေးစငျအသငျး နညျးပွခြုပျ အနျတှမျနီဟေးတို့သညျ ယနမေ့နကျပိုငျးမှ စတငျ၍ နှဈဖကျသဘောတူ စာခြုပျဖကျြသိမျးလိုကျပွီ ဖွဈသညျ။ MFF နှငျ့ ဂြာမနီ နညျးပွ အနျတှမျနီဟေး၊ လကျထောကျနညျးပွ ခီမေးလျ ဟာလတျ၊ ဂိုးနညျးပွ ကာစတနျ မာတငျ ဟာဇော့ တို့သညျ ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၈ ခုနှဈ မလေ ၁၆ ရကျနကေ့ တဈနှဈခှဲကွာ စာခြူပျသကျတမျး ခြုပျဆိုခဲ့ကွပွီး မွနျမာ့လကျရှေးစငျ အသငျးအား ၂၀၁၈ အာဆီယံ ခနျြပီယံရှဈ (ဆူဇူကီးဖလား) ပွိုငျပှဲတှငျလညျးကောငျး၊ မွနျမာ ယူ၂၃ အိုလံပဈ အသငျးအား အာရှအားကစား ပှဲတျောတှငျလညျးကောငျး အောငျမွငျမှုမြား ရရှိရနျ အတူတကှ ကွိုးစားခဲ့ကွသညျ။
သို့သျော ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၈ ဆူဇူကီးဖလား ပွိုငျပှဲတှငျ မွနျမာအသငျး အုပျစုမှထှကျခဲ့ရခွငျး အတှကျ မွနျမာနိုငျငံ ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ နညျးစနဈကျောမတီမှ အပွနျအလှနျ သုံးသပျမှုမြား ပွုလုပျကာ မွနျမာ့လကျရှေးစငျ အသငျးနညျးပွခြုပျ အနျတှမျနီဟေးနှငျ့ လမျးခှဲရနျအတှကျ ဆုံးဖွတျလိုကျရခွငျး ဖွဈသညျ။
” နညျးပွဘဝနဲ့ မွနျမာ့လကျရှေးစငျ အသငျးကို တာဝနျယူခဲ့တဲ့ ကာလတလြှောကျမှာ အဓိက အားပေးခဲ့ကွတဲ့ မွနျမာ့ ဘောလုံးခဈြ ပရိသတျမြား အားလုံးကို အထူးပဲ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့နဲ့အတူ လကျတှဲဆောငျရှကျခဲ့ကွတဲ့ မွနျမာနိုငျငံဘောလုံး အဖှဲ့ခြုပျနှငျ့ မွနျမာ့ လကျရှေးစငျ အသငျးသားမြား အားလုံးကိုလညျး ဒီနရောကနေ ကြေးဇူးတငျပါတယျ၊ အစစအရာရာ ပံ့ပိုးဆောငျရှကျပေးခဲ့မှုတှေ အတှကျ ကြှနျတျောတို့ လုံးဝ မမပေ့ါဘူး။ အနာဂတျမှာ မွနျမာ့ ဘောလုံးလောက တိုးတကျ အောငျမွငျဖို့ ကြှနျတျော ဆုတောငျးပါတယျ။ မွနျမာ့လကျရှေးစငျ အသငျးရဲ့ လာမယျ့ ပွိုငျပှဲအသီးသီးမှာလညျး အနိုငျရအောငျမွငျပါစလေို့ ဆန်ဒပွုပါတယျ။” ဟု အနျတှမျနီဟေးက နှုတျဆကျစကား ပွောကွားခဲ့သညျ။
နညျးပွခြူပျအား စာခြူပျဖကျြသိမျးခွငျးနှငျ့ စပျလဉျြး၍ MFF နညျးစနဈ ကျောမတီက ” မွနျမာ့ လကျရှေးစငျ အသငျး ဆူဇူကီးဖလား ပွိုငျပှဲအုပျစုမှ ထှကျခဲ့ရခွငျးမှာ နညျးပွခြူပျ တဈဦးတညျး အပျေါတှငျသာ တာဝနျရှိခွငျး မဟုတျကွောငျး၊ MFF နညျးစနဈကျောမတီ အနဖွေငျ့ ဘကျပေါငျးစုံ စနဈတကြ အပွနျအလှနျ သုံးသပျခဲ့ကွောငျး၊ MFF နှငျ့ နညျးပွခြူပျတို့ စာခြူပျ ခြူပျဆိုရာတှငျ အဓိက ဦးတညျခကျြဖွဈသညျ့ အာဆီယံ ခနျြပီယံရှဈ(ဆူဇူကီးဖလား) အောငျမွငျမှုရရှိရေး သညျသာ စာခြူပျ၏ အဓိကအခကျြ ဖွဈသညျ့အတှကျ ယခုကဲ့သို့ လမျးခှဲရနျ ဆုံးဖွတျခဲ့ခွငျး ဖွဈကွောငျး၊ နညျးပွခြူပျတှငျသာ အပွညျ့အဝ တာဝနျရှိခွငျး မဟုတျဘဲ ကစားသမားမြား အပါအဝငျ ဘကျပေါငျးစုံမှ အားနညျးမှုမြား ကွောငျ့သာ အောငျမွငျမှုနှငျ့ ဝေးကှာရခွငျး ဖွဈကွောငျး၊ အဖှဲ့ခြူပျနှငျ့ ကဏ်ဍအသီးသီး အားနညျးမှု၊ မွနျမာ့ ဘောလုံး၏ အခွခေံ လိုအပျခကျြမြား ဖွဈသညျ့ ကစားကှငျး Facilities မြား ကောငျးမှနျခွငျး လုံလောကျခွငျး မရှိမှု၊ လူငယျပွိုငျပှဲမြား ကငျြးပနသေျောလညျး လုံလောကျခွငျး မရှိသေးမှု၊ မြိုးဆကျသဈမြား စဉျဆကျမပွတျ ပျေါထှကျနရေေးနှငျ့ လူငယျပွိုငျပှဲမြား အဆငျ့အတနျးမွငျ့မွငျ့ ကငျြးပနိုငျခွငျး မရှိသေးမှု၊ အခွခေံ အဆောကျအဦနှငျ့ သကျဆိုငျရာ နရောအသီးသီးတှငျ ပံ့ပိုးကူညီမှုမြား နညျးပါးမှု၊ နိုငျငံတကာနှငျ့ ယှဉျမညျဆိုပါက အဘကျဘကျမှ နိမျ့ကနြမှေု အစရှိသဖွငျ့ အခွခေံ ဘကျပေါငျးစုံ အားနညျးနမှေုမြားနှငျ့လညျး သကျဆိုငျကွောငျး နညျးစနဈကျောမတီက သုံးသပျခဲ့သညျ။
နညျးပွခြူပျ အနျတှမျနီဟေး လကျထကျ မွနျမာ့လကျရှေးစငျ ယူ၂၃ အသငျး၏ ရလဒျမြား
မွနျမာ (၃-၄) တောငျကိုရီးယား (Alpine Cup 2018)
မွနျမာ (၁-၁) ဘာရိနျး (Alpine Cup 2018)
မွနျမာ (၂-၁) ထိုငျး (Alpine Cup 2018)
မွနျမာ (၁-၁) မွောကျကိုရီးယား (Asian Games 2018)
မွနျမာ (၀-၃) ဆျောဒီအာရဗြေ (Asian Games 2018)
မွနျမာ (၂-၀) အီရနျ (Asian Games 2018)
နညျးပွခြူပျ အနျတှမျနီဟေး လကျထကျ မွနျမာ့လကျရှေးစငျ အသငျး၏ ရလဒျမြား
မွနျမာ (၀-၁) တရုတျ (International Friendly Match)
မွနျမာ (၀-၃) အငျဒိုနီးရှား (International Friendly Match)
မွနျမာ (၀-၃) ဘိုလီဗီးယား (International Friendly Match)
မွနျမာ (၁-၄) ဘာရိနျး (International Friendly Match)
မွနျမာ (၄-၁) ကမ်ဘောဒီးယား (AFF Suzuki Cup 2018)
မွနျမာ (၃-၁) လာအို (AFF Suzuki Cup 2018)
မွနျမာ (၀-၀) ဗီယကျနမျ (AFF Suzuki Cup 2018)
မွနျမာ (၀-၃) မလေးရှား (AFF Suzuki Cup 2018)
Grandamar အသင်းကို Myawady အသင်း ဂိုးပြတ် အနိုင်ရ
MFF Women’s League 2018-19 Week-2 တတိယမြောက်ပွဲစဉ်တွင် ISPE အသင်း ၁၇ ဂိုးပြတ်အနိုင် ရရှိ